Madaxweyne Erdogan oo qaaday tallaabo ka carreysiisay Midowga Yurub iyo Mareykanka. • Oodweynenews.com Oodweyne News
Madaxweyne Erdogan oo qaaday tallaabo ka carreysiisay Midowga Yurub iyo Mareykanka.
Isaga oo ka hadlayey munaasabad lagu xusayey 47 guuradii qabsashada Turkey ee jasiiraddan kala qeybsan, ayaa Erdogan wuxuu weeraray isku dayada guul-darreystay ee QM ay ku mideyneyso labada Qubrus, isaga oo yidhi “Ma hayno 50 sano oo kale oo aan khasaarino.”
“Wax horumar ah lagama gaari karo wada-xaajoodyada haddii aan la qirin inay jiraan laba shacab iyo labad dal oo isku xuquuq ah,” ayuu yidhi madaxweynaha Turkey.
“Dowladda Mareykanka waxay ficillada Qubrusta Turkish-ka ah ee Varosha, ayada oo taageero ka heleyso Turkey, u aragtaa daandaansi, aan la aqbali karin, oo aan la jaanqaadi karin ballan-qaadyadoodii hore ee ahaa inay si wax ku ool ah uga qeyb-galayaan wada-hadallo xal ah,” ayuu yidhi Blinken.